Iindaba zeendaba eziza kubamba i-Reader's Attention
Ngoko wenze itoni yokunika ingxelo, uqhutywe ngodliwano-ndlebe olunzulu kwaye wambamba ibali elikhulu. Kodwa wonke umsebenzi wakho onzima uya kutshabalala xa ubhala isihloko esityebileyo ukuba akukho mntu uya kufunda. Landela la macebiso uze ube endleleni yakho yokubhala ibali leendaba eziza kukufumana ingqalelo yomfundi. Cinga ngolu hlobo: Ababhali beendaba babhale ukuba bafundwe, kungekhona ukuba baxoxwe ngamabali abo, bachane? Ngaloo ndlela ukuqala kweengxelo zentatheli ziyakwazi ukuvelisa amabali aza kuthatha amaninzi ebona.
Bhala i-Great Lede
(Chris Schmidt / E + / Getty Izithombe)
Umvuzo wakho uyadutshulwa ukufumana ingqalelo abafundi bakho. Bhala omkhulu kwaye kufuneka bafunde. Bhala into ebangelisayo kwaye baya kudlula yonke imisebenzi yakho nzima. Ubuqhetseba kukuba, umvuzo kufuneka udlulisele amaphuzu aphambili kweli bali kungamazwi angama-35-40-kwaye ube nolonwabo olwaneleyo ukwenza abafundi bafune ngakumbi. Kaninzi "
Mhlawumbi uvile umhleli uthi xa kuziwa kubhala beendaba, zigcine zifutshane, zithande, kwaye zize zibe ngongoma. Abanye abahleli bathi le "kubhala ngokuqinile." Kuthetha ukuhambisa ulwazi oluninzi ngangokunokwenzeka ngamagama ambalwa njengoko kunokwenzeka. Kuzwakala kulula, kodwa ukuba uchithe iminyaka ubhala amaphepha ophando, apho ugxininiso luvame ukuba luninzi, luya kuba nzima. Uyenza njani? Fumana ingqalelo, gweba amanqaku amaninzi, kwaye sebenzisa imodeli ebizwa ngokuba yi-SVO okanye i-Subject-Verb-Object.
Iipiramidi ezingaphenduliyo imodeli yokwakha yeendaba. Kuthetha nje ukuba ulwazi oluphambili okanye olubaluleke kakhulu lufanele lube phezulu - ekuqaleni kwebali lakho, kunye nolwazi olubalulekileyo lufanele luhambe ngasezantsi. Kwaye njengoko uhamba ukusuka phezulu ukuya ngasezantsi, ulwazi olunikeziweyo kufuneka lube luba luleke kangangoko. Ifomathi ibonakala ingaqondakali ekuqaleni, kodwa kulula ukuyithatha, kwaye kukho izizathu ezenza ukuba intatheli zisetyenziswe amashumi eminyaka.
Sebenzisa ii-Quotes ezilungileyo
Ngoko wenze i- interview exude kunye nomthombo kwaye unamaphepha amanqaku. Kodwa amathuba okuba uya kukwazi ukulingana neengcaphuno ezimbalwa kuloo ndlebe exude kwi-article yakho. Ziziphi na ozisebenzisayo? Iimpapasho zihlala zixoxa ngokusebenzisa iincwadana "ezilungileyo" kuphela, kodwa oko kuthetha ukuthini? Ngokuqinisekileyo, icatshulwa elungileyo xa umntu etshilo into enomdla, kwaye uthi ngendlela enomdla. Kaninzi "
Sebenzisa iiVebhu kunye neendlela ezifanelekileyo
Kukhona umgaqo omdala kwibhizinisi lokubhala-bonisa, ungaxeleli. Ingxaki ngezichazi kukuba ababonisi nantoni na. Ngamanye amazwi, awanqwenela ukuba akhuphe iingcamango ezibonakalayo kwiingqondo zabafundi kwaye zithatha indawo ecebileyo yokubhala kakuhle, inkcazelo efanelekileyo. Kwaye ngoxa abahleli banokusebenzisa izenzi - batyhila isenzo baze banike ibali ingqiqo -bavame abalobi basebenzisa ukhathala, izenzi ezingaphantsi. Kaninzi "
Ziqhelise, Ziqhelise, Ziqhelise
Udaba lweendaba lufana nantoni na enye - xa usebenza ngokwakho, bhetele uza kufumana. Kwaye nangona kungekho ndawo ithatha indawo yebakala lokwenene ukunika ingxelo kunye nokugqithisela kwisithuba esiphelileyo, ungasebenzisa izivivinyo zokubhala njengezinto ezifunyenweyo apha kwaye uzihlaziye izakhono zakho. Kwaye unokukwazi ukuphucula isivinini sakho sokubhala ngokuziphoqa ukuba utyumle amabali ngelixa okanye ngaphantsi. Kaninzi "
Iindlela ezilula zokugubha iiveki yokuxabisa ootitshala
Gweba iPaint iRC Body
Ukubetha phantsi kunye nokukhupha
I-Charlemagne: I-Battle of Roncevaux Pass
Iingxelo zeLwesihlanu ezilungileyo